चलचित्र प्राबिधिकलाई दिपकराज गिरिको १ लाख १० हजार सहयोग - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र २१, २०७६ समय: २२:३१:०९
ईटहरी/ कोरोना भाईरसको त्रासले यतिबेला नेपाल व्यापक रुपमा प्रभावित भएको छ । हरेक क्षेत्रका ब्यक्ती तथा ब्यावसाय नेपाल लकडाउनले खाली हात भएका छन भने अलि अलि गर्दै कोरोना संक्रमीत पनि थपिदै गैइरहेको छ । यता कोरोना त्रासका कारण नेपाली फिल्म क्षेत्र पनि स्वत प्रभावित भएको छ भने यसमा कार्यरत प्राबिधिकहरु यतिबेला बिचलितको अवस्थामा पुगेको छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै फिल्म प्राबिधिकहरुको हितमा कुराहरु उठ्न थाले संगै सहयोग पनि सुरु भएको छ ।
जसमा हास्य कलाकार तथा निर्माता दिपक राज गिरि अघि बढेका छन् । प्रायः आलोचना बढी खेपिरहने गिरि राम्रा काममा पनि धेरै नै अघि छन् । उनी कहिले फिल्मका कारण आलोचित हुन्छन त कहिले फेसबुक स्टाटसका कारण आलोचित भैरहेका हुन्छन् । तर यसपटक भने उनले तारिफयोग्य काम गरेका छन् । फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उनले चलचित्र प्राबिधिकलाई आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उनले प्राबिधिकहरुलाई नगद १ लाख १० हजार सहयोग गर्ने भएका हुन । सहयोग गर्न चाहने चलचित्र क्षेत्रका अन्यलाई पनि आग्रह गर्दै आफुलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेका छन् । यस्तो छ उनको स्टाटस –
हामिलाइ सुटिगंको समयमा,भोक लाग्दा खाना खुवाउने, हामिलाइ गर्मि हूदॉ छाता ओडाउने, हामिलाइ राम्रो देखाउन गर्हौ लाइट उचाल्ने प्राबिधिकहरूको लागि यो कठिन समयमा केहि सहयोग गरौ….हाम्रो तर्फबाट रू १ लाख १० हजार दिदैछौ !!!! चलचित्र क्षेत्रका इच्छूक साथिहरूले पनि inbox गर्न सक्नु हुनेछ …आउनुस एकमुष्ट सहयोग गरौ!!!”